Zidane oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka caawa ee Madrid Derby – Gool FM
(Madrid) 28 Sebt 2019. Tababare Zinedine Zidane ayaa si rasmi ah u shaaciyey liiska xiddigaha kooxda Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka ka tirsan horyaalka La Liga ee Madrid Derby.
Los Blancos ayaa booqanaysa garoonka Wanda Metropolitano caawa oo Sabti ah waxaana ay halkaas kula dheeli doonaan kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Atletico Madrid oo kal ciyaareedkan ay wajiyo cusub ku soo biireen.
Haddaba liiskan rasmiga ah uu ku dhawaaqay tababare Zinedine Zidane ayaa waxaa lagu arkay war aad ugu wanaagsan taageerayaasha kooxda Real Madrid kahor kulanka caawa ee Madrid Derby, taasoo ah dib u soo laabashada Luka Modric.
Laakiin waxaa wali maqan isla markaana aan liiskan ku soo bixin xiddiga reer Brazil ee Marcelo iyo saaxiibkiis Ferland Mendy waxayna ku maqan yihiin sababa la xiriira dhaawac.
Haddaba liiska xiddigaha kooxda Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka adag ee caawa Madrid Derby oo dhameystiran halka hoose kaga boggo:
Drogba oo shaaca ka qaaday labo xiddig uu u arko in mustaqbalka ay ku guuleysan karaan Ballon d'Or
Shaxda rasmiga ah kooxda Juventus kulanka SPAL ee horyaalka Serie A